एक बच्चाको रूपमा एक चिसो को पहिलो साइन मा आमा हेरविचार हामीलाई घेरिएको र गरे साधारण चिसो गर्न सबै एक थप गम्भीर रोग मा गरियो छैन। र हामी सजिलै र बस घरमा बसे पर्छ भने, र वर्गहरू, अब तपाईंले काम र आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयास गर्न जाने कुनै पनि अवस्थामा छोड्न खुसी। त्यसैले, हरेक वयस्क सुरु ढिलो होस् वा चाँडो लाग्छ बारेमा प्रश्न के गर्न, बिरामी हुनेछ?
एक चिसो को पहिलो संकेत
केहि पनि गरिरहेको अघि, तपाईं साधारण चिसो को लक्षण हो ठ्याक्कै के हो जान्नु आवश्यक:
खुजली र नाक, मा जलन अनुभूति छ सधैं आफ्नो नाक सोचो गर्न चाहनुहुन्छ किन;
बारम्बार sneezing, तर व्यक्ति एक एलर्जी देखि ग्रस्त गर्छ भने मात्र छैन (एक व्यक्ति बिरामी छैन रूपमा sneezing सुरु भने, डाक्टर शीघ्र सक्नुहुन्छ);
हाच्छिउं गर्नु र नाक को खुजली पछि निम्नानुसार तुरुन्तै जो वृद्धि lacrimation,;
सम्भव नाक भीड
दिन भर सामान्य कमजोरी को एक भावना, म सुत्न सुत्न चाहनुहुन्छ;
नाक भीड कारण छ कि टाउको दुखाइ;
मांसपेशी soreness, एक दुख्यो महसुस;
शरीर को तापमान मा वृद्धि, तर 38 उच्च भन्दा डिग्री।
त्यस अवस्थामा, एक भन्दा बढी लक्षण थियो भने, एक तुरुन्तै बिरामी पर्नु सुरु बुझ्छ। के गर्ने? मात्र तरिका जटिलताहरू रोक्न किनभने र, तुरुन्तै आवश्यक कुनै पनि कारबाही गर्न।
एक चिसो को पहिलो साइन मा मुख्य कार्य
छैन सबै लोक हामी बाल्यकाल देखि सम्झना हो कि उपचार, सर्दी को जब पहिलो लक्षण प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, फ्लोट खुट्टा वा तातो स्नान मात्र मामला हुन सक्छ भने कुनै गर्मी वा अन्य contraindications।
त्यसैले, हरेक वयस्क व्यक्ति एक चिसो को पहिलो साइन मा गर्न ठीक के थाहा गर्न आवश्यक छ। लिएको को उपाय निम्न मदतको लागि सुविधा:
शरीर तापमान वृद्धि गरेको छ भने, किनभने संक्रमण नियन्त्रण शरीर कारण ऊर्जा धेरै हराउछ, ओछ्यानमा आराम पालना गर्न आवश्यक छैन।
नियमित कोठा हवादार। यो जीवाणु मार्न र आफ्नो प्रजनन को लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
तातो चिया, कूल्हों देखि मह वा अदुवा, वा पेय थप्न सिफारिस गरिएको छ जो प्राथमिकता दिन तरल पदार्थ प्रशस्त पिउने।
समय समयमा यस्तो camomile वा marigold रूपमा विशेष decoctions कुल्ला गर्नु। पाक सोडा, नुन, आयोडिन, furatsilina को प्रयोग संग विशेष समाधान प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो।
नुन पानी वा एक विशेष उपकरण, जो फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ आफ्नो नाक कुल्ला। नुनखरा, यो न्यानो पानी एक गिलास मा स्वतन्त्र हुन सक्छ तयार नुन को चम्मच थप्नुहोस्।
खोकी को मह र घिउ भंग गर्न जो दूध न्यानो गर्न मद्दत गर्छ। तपाईं एक हट संकुचन लागू गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल सामान्य शरीर को तापमान मा।
र, को पाठ्यक्रम, तरकारी र फल को एक ठूलो रकम हो जो भिटामिन, को बारे मा भूल छैन। र एक मानिस सोच्छ भने त: - ठीक नतिजा सफल जोगिन छ गर्न। "? एक डाक्टर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ सुझाव के गर्न बिरामी सर्दी बन्नुहोस्।" समसामयिक विशेषज्ञ मद्दत पछि सधैं स्वागत छ।
सुरुमा Churn तापमान छैन सिफारिस गरिएको। यो संक्रमण एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया, यो रोग विरुद्ध लडाई पूर्ण स्विंग छ भन्ने हो छ। तर, यो समग्र राम्ररी जा ध्यान लायक छ। तापमान पनि गरिबी सहन छ भने, यो तापमान "Nurofenom" तल ल्याउन सम्भव छ।
स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्छ, र हरेक दिन बढ्दै छ भने, यो घर मा डाक्टर कल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। सम्झना, साधारण चिसो, यदि अनुपचारित बायाँ, दुखेको घाँटी वा निमोनिया विकास हुन सक्छ।
म बिरामी प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहोस्। के गर्ने? तपाईं हरेक घर छ गर्न बाध्य छन् लागूऔषधको एक नम्बर लाग्न सक्छ। खैर, यो सही उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् गर्ने एक विशेषज्ञ, को सल्लाह बेवास्ता गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
त्यहाँ इरादा छन् स्वास्थ्य सुविधा र पुन: गति अप गर्न धेरै दबाइहरु छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी:
भिटामिन सी, paracetamol र loratadine समावेश जो "AnviMaks"। यो चिकित्सकीय प्रभाव इन्जेशन पछि 30 मिनेट पछि पहिले नै महसुस गरिएको छ।
"Pinosol" - जो जो साइड इफेक्ट र लत को जोखिम कम छ भन्ने हो, तिनीहरूले प्राकृतिक सामाग्री देखि गरिन्छ किनभने, सबै भन्दा डाक्टर, नाक खस्छ।
"Suprastin" - नाक र घाँटी को अस्तर मा सुनिंनु कम गर्न सक्छ कि एक antihistamine।
"Tantum वर्ड" - एक स्प्रे घाँटी उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ कि।
यो एक व्यक्ति पहिले उपचार, रोग थप प्रगति रोक्न अधिक संभावना सुरु गर्न आफ्नो हालत ध्यान भुक्तानी र फेला छ कि एक चिसो, समय को पहिलो संकेत उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। मेरो टाउको मा विचार गर्दा: "म एक चिसो बिरामी प्राप्त गर्न थाले, के गर्ने?" - सहायता डाक्टर हुन सक्छ।
बस एक बच्चा: पहिलो सहायता
विशेष गरी सान्दर्भिक छोराछोरीको सर्दी को पहिलो साइन मा के को प्रश्न छ। तपाईं आफ्नो बच्चा मदत गर्न सक्छ, तर केवल यदि तपाईं नआत्तिनुहोस्।
बच्चा ज्वरो छ भने पत्ता लगाउन पहिलो कुरा। यदि यो उच्च छ, तर 38 डिग्री तल, यो तल गोली छैन आवश्यक छ। यसलाई आफ्नै संक्रमण लड्न शरीर लागि समय अनुमति आवश्यक छ। यो 38 डिग्री माथि छ भने, यो यस्तो "Nurofen" को रूपमा antipyretics दिन उचित छ। उपकरण काम भने गर्दैन र तापमान वृद्धि जारी, यो न्यानो पानी संग बच्चा (वोदका र सिरका प्रयोग गर्नु हुँदैन) हटाउन आवश्यक छ।
बच्चाको अवस्था स्थिर गरेपछि, एक antiviral दबाइ जस्तै "Anaferon" को रूपमा, दिइएको हुनुपर्छ। superfluous र inhalation लागूपदार्थ वा खनिज पानी हुनेछ। उबला आलु को एक सास - एक लोक उपाय प्रयोग गर्न inhalation लागि विशेष उपकरण सम्भव छैन भने। यस्तो एकीकृत उपकरण को प्रभाव: को खोकी, घाँटी उपचार, चिसो लक्षण को उन्मूलन को छुटकारा रही। तपाईं बिरामी प्राप्त गर्न सुरु गर्दा के पिउन, एक डाक्टर भन्छन्। त्यसैले राम्रो छैन उसलाई ढिलाइ गर्न पदयात्रा।
कुनै पनि मामला मा साधारण चिसो को पहिलो लक्षण तुरुन्तै रोग एक दिन मा गायब हुनेछ भन्ने आशा मा एन्टिबायोटिक लाग्न सक्छ छैनन् जब कि सम्झना। चमत्कार लागूपदार्थ यस्तो अवस्थित छैन, र अनुचित उपचार खराब नतिजा परिणाम हुन सक्छ गर्दैन। "तपाईं के बिरामी बन्न भने? म यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ?" - तपाईं सोध्नु। उत्तर: तपाईको आफ्नै शरीर सुन्न। उहाँले आवश्यक छ के तपाईं बताउन हुनेछ: निद्रा - ओछ्यानमा जाने, म एक निश्चित उत्पादन खान चाहनुहुन्छ - खानुहोस्। र कुनै पनि मामला मा यो राज्य वा काम गर्न कहीं जानु छैन।
खोपडी को seborrhea लक्षण। घरमा seborrhea खोपडी उपचार
Uterine fibroids: लक्षण, निदान र उपचार
Mycosis - यो के हो? खेलाडी गरेको खुट्टा रोग: कारण, लक्षण, रोकथाम र उपचार
पुरानो गलसुआशोथ: घर मा उपचार। Rinsing, wiping, सुधार प्रतिरक्षा
प्रभाव र उपचार - Sepsis रगत छ
कसरी आँखा मा एक सिद्ध तीर आकर्षित गर्न?
अर्थको साथ महान व्यक्तिहरूको शिक्षकहरूको बारेमा कुरा
हालको खाता "बचत" कार्ड म कसरी थाहा छ? हालको खाता बैंक कार्ड "बचत" कहाँ हेर्न?
Tequila: ब्रान्ड, सबै भन्दा संसारमा लोकप्रिय
कालो राज बस्त्र: एक जादूगर वा सुपर हिरो?
पिउने र लोक औषधि प्रयोग गर्न बन्द गर्न रक्सी न पीने वाला कसरी मदत गर्न?
युरोप मा छुट्टी।
नागरिक हतियार - बन्दुक "Saiga"